Musharaxiinta oo kahadlay shacabkii lagu rasaaseeyey Muqdisho | Wardoon
Home Somali News Musharaxiinta oo kahadlay shacabkii lagu rasaaseeyey Muqdisho
Musharaxiinta oo kahadlay shacabkii lagu rasaaseeyey Muqdisho
Golaha Midowga Musharaxiinta mucaaridka ayaa war-murtiyeed kulul kasoo saaray rasaastii ay dowladda federaalka Soomaaliya maanta ku fureen dadweynihii banaan-baxa ka dhigayey qeybo kamid ah magaalada Muqdisho.
Golaha ayaa si kulul u cambaareeyay falkaasi oo ku tilmaamay mid arxan daro ah oo ay ciidamada dowladda federaalka ay ugu fureen shacabka Soomaaliyeed ee sida nabadda ah ugu banaan-baxayay caasimada.
“Golaha Midowga Musharaxiinta wuxuu si kulul u canbaaraynayaa rasaastii ay ciidanka dowladda Federaalka ahi sida arxan darrida ah ugu fureen shacabka Soomaaliyeed ee sida nabadda ah ugu mudaharaadayey magaalada Muqdisho,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Waxa kale oo lagu yiri “Golahu wuxuu mas’uuliyada eeddaas dusha kas saarayaa Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah Maxamada Cabdullaahi Farmaajo oo ciidanka Gorgor, iyo Haramcad ee ay dowladda Turkiga tababrtay u adeegsaday caburinta shacabka mudaaharadaayey.”
Musharaxiinta mucaaridka ayaa falkaasi ku eedeeyay inuu ka dambeeyo madaxweyne Farmaajo, maadama banaan-baxaasi looga soo horjeeday madaxweynaha, oo xiligan dib iskugu soo taagay doorashada soo socota.
Qoraalka ayaa waxa lagu sheegay in rasaastii ay fureen ciidanka ay ku dhaawacmeen ilaa afar ruux, halka la xiray labo ruux oo kale, iyaga oo xusay in taliska ciidanka nabad-sugida iyo booliska gobolka Banaadir uu ku raad-joogo dadkii banaan-baxaasi ka qeyb-galay, sida lagu sheegay qoraalka.
Waxay si wada-jir ah u codsadeen musharaxiinta mucaaridka in si deg-deg ah loo sii daayo dadka loo xiray banaan-baxii maanta, isla markaana la joojiyo wax ay ku sheegen “baacsiga lagu hayo dadkii dibad-baxa ka qeyb-galay”.
“Goluhu wuxuu uga digayaa ciidanka inay qaataan amarka lagu xabadaynayo shacabka walaalahood iyo waalidoontood ah, waana in ay xusuusnaadaan in muddo xileedka Madaxweyne Farmaajo ay ka harsan tahay oo keli ah 54-maalin”.
Musharaxiinta mucaaridka ayaa sidoo kale waxay shacabka ugu baaqeen inay sii wadaan banaan-baxyada ka dhanka ah xukuumadda uu majaraha u hayo Farmaajo, iyagoona balan-qaaday inay qeyb ka noqon doonaan dibad-baxyada soo socda.
Ugu dambeyntiina waxa qoraalka lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu diidan yahay in la qabto doorasho xor iyo xalaal ah, isla markaana la dhigo dibad-baxyo iyo kulamo nabadeed, taasi oo ay sheegen inay ka hor imaneyso dastuurka dalka iyo qiyamka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka.
Previous articleDAAWO:-Hooyo gabadheed dishay kadibna Meydkeeda ku dhex qarisay Guriga uu falka ka dhacay
Next articleDAAWO:-Faysal Cali Waraabe oo Soo Dhaweeyay Banaan-baxa ka Dhacay Muqdisho
Akhriso:- Beesha Sacad oo War-murtiyeed ka soo saartay Xaalada Siyaasadeed...